MacOS Sierra ဖြင့်တည်နေရာအခြေပြုအကြံပြုချက်များကို disable လုပ်နည်း။ ငါက Mac ပါ
Ignatius ခန်းမ | | MacOS Sierra, လဲ tutorial
iPhone သို့မဟုတ် iPad များကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac သည် Spotlight, Safari, Siri, Maps ရှိအချို့သောရလဒ်များကိုဖော်ပြရန်ကျွန်ုပ်တို့၏တည်နေရာကိုသုံးနိုင်သည်။ တည်နေရာကို activate လုပ်, ငါတို့တည်နေရာနှင့်အနီးဆုံးရလဒ်များကိုပြသပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း၊ Apple သည်ထုတ်လုပ်သောမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များနှင့်အတူတူပင်။ တည်နေရာကိုဖွင့်ထားခြင်းကိုအကြောင်းပြချက်များစွာအတွက်အသုံးဝင်သည် အက်ပလီကေးရှင်းမြေပုံနှင့်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုတွက်ချက်သောအခါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်းများပြုလုပ်ရာတွင်ပိုမိုရှာဖွေရန်ဝေါဟာရများကိုထည့်သွင်းပါ။.
သို့သော်သုံးစွဲသူများအားလုံးသည်သူတို့၏တည်နေရာကို Mac နှင့်မျှဝေလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ အထူးသဖြင့် Find My Mac မှခိုးယူခံရလျှင်၎င်းသည်အလွန်အသုံးဝင်ပါသည်။ အနာဂတ်ရှာဖွေမှုများတွင်မတူညီသော Apple ၀ န်ဆောင်မှုများမှရရှိသောရလဒ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အနေအထားပေါ်မမူတည်စေရန်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပိတ်ထားနိုင်သည်.
ပထမ ဦး စွာဤလုပ်ဆောင်ချက်သည်ယခင်ဗားရှင်းများတွင်ပါ MacOS version 10.12 မှသာရနိုင်သည်ကိုသတိရပါ အဲဒါကိုရရှိနိုင်ပေမယ့်အခြားအမည်အောက်မှာ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac ပေါ်ရှိတည်နေရာအကြံပြုချက်များကိုပိတ်ပါ
Apple menu ကိုသွားပြီးအပေါ်ကိုနှိပ်ပါ System ကို ဦး စားပေး.
ယခုကိုနှိပ်ပါ လုံခြုံရေးနှင့် privacy.
အတွင်း သီးသန့်လုံခြုံရေး မိမိကိုယ်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီးစနစ်ကိုပြောင်းလဲရန်သော့ခလောက်ကိုနှိပ်ပါ။
ကိုနှိပ်ပါ တည်နေရာ, ဘေးထွက် menu မှာတည်ရှိပါတယ်။
ကျနော်တို့ကိုသွားအခွင့်အရေး၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း၌တည်၏ System န်ဆောင်မှုများ> အသေးစိတ်.
ပထမ box တည်နေရာပေါ်အခြေခံပြီးအကြံပြုချက်များ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ပိတ်ထားရမည့်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ငါတို့လုပ်မယ်ဆိုရင် 10.12 မတိုင်မီဗားရှင်းကိုအသုံးပြုခြင်း Safari နှင့် Spotlight Suggestions box ကိုပိတ်ထားရမည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » MacOS Sierra ဖြင့် Mac ပေါ်တွင်တည်နေရာအခြေပြုအကြံပြုချက်များကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ
Mac အတွက် Adobe Photoshop Elements 15 တွင်ဘာအသစ်များလဲ